Ngihlobo luni lwe-webbacklinks enginayo kuwebhusayithi yami?
Lapha sizokhuluma nge-webbacklinks yewebhusayithi yakho. Eqinisweni, ukubuyisela emuva kwekhwalithi kuphela kungenza okuhle kuwebhusayithi yakho. Ukwanele kwalokhu okudluliselwa kuyo yonke iwebhusayithi kungaba umthombo wokugcina kanye nolwazi oluphezulu lolwazi oluthile lwababukeli bayo noma i-niche yemakethe yebhizinisi.Konke kusebenza ngokumane - abasebenzisi abaningi bukhoma bazoqala ukuza kuwebhusayithi enjalo efuna ulwazi, umkhiqizo othile noma isevisi. Ngakho, umbuzo uwukuthi - uhlobo luni lwe-webbacklink okufanele ube nalo kuwebhusayithi yakho? Ake sibone ukuthi singenza kanjani ibhola lokuphumelela. Okokuqala, ngizokukhombisa ukuthi yini eyenza i-webbacklinks ikhwalithi, nokuthi ungathola kanjani okuningi ngezinhlelo zokwakha izixhumanisi ezingasetshenziswa kakhulu. Ngakho-ke, ake siqale.
I-Quality VS. Isibalo
Ngaphandle kwe-inthanethi, empilweni yangempela, izincomo ezinjalo zisebenza kuphela uma zivela endaweni ethembekile futhi ehloniphekile. Uma kungenjalo, bekungeke kube khona iphuzu lokubalandela, akunjalo? Uma sicabanga ukuthi yonke imibhalo yewebhu ibonakala sengathi ibukeka njengezincomo ezincane, zonke izixhumanisi kufanele zivele njalo zivela endaweni ene-PA ephezulu (igunya lekhasi), i-PR (isikhundla sekhasi), ne-DA (igunya lesizinda). Ngale ndlela, ikhwalithi ye-webbacklinks oyothola kuwebhusayithi yakho iyinto ebaluleke kakhulu, kunokuba nje inani labo.
Futhi ukuthi yini okufanele siyikhumbule ukuthi ukuxhumaniswa kwekhwalithi kusho ukugcina ukuhambisana kwayo. Ukubeka ku-English e-Plain, uma i-Google ithola ukuthi ezinye ze-webbacklink zakho zivela emithonjeni ye-third party e-intanethi, engahambisani nhlobo nendaba, izobabona njengogaxekile ngemvelo, i. e. , cabanga ukuthi akusizi ngalutho futhi unikeze okungenani i-zero value. Okungaphezulu - iwebhusayithi yakho ingase izuze inhlawulo enzima yesimo esinikezwe i-Google, ngenxa yomsebenzi onjalo osolisayo ovame ukuhlobene nokunye ukuhlukunyezwa, noma ukuziphatha okukhohlisayo.
Uma ngabe kwenzeka esimweni esibucayi kakhulu, ukubhekwa okubuhlungu kunakho konke kungaqeda nokwenza amakhasi akho ewebhu angabonakali ngokuphelele kubasesho bukhoma - okusho ukuthi u-deindexed negunya lakho lesizinda elahlekile kanye naso sonke. Ngakho-ke, masibhekane nakho - ama-webbacklink kumele ahlale ekhwalithi. Yingakho kuyingozi kakhulu ukuthenga noma ukuzama ukushintshanisana nabo.
Ukwakha izinga lokuxhumanisa
Ngakho-ke, ungathola kanjani izindawo ezifanele ukuthola izixhumanisi eziphephile kuphela neziphumelelayo? Ake sibheke uhlelo olufushane lomsebenzi wokuqedela umsebenzi. Ngezansi uhlu olufushane lwamaphoyinti e-bullet ukukusiza ukuthi uhambise ithrekhi efanele:
Qinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho inikeza inani langempela - yakha kuphela okuqukethwe okukodwa okuwusizo nokwaziswa kwekhasi, okuhambisana nendaba yakho kuphela ukwamukela ukwenza ireferensi noma ukwabelana ngayo kwiWebhu.
Zizwe ukhululekile ukuhlola amawebhusayithi akho okuncintisana - okwenziwe kahle ukulandela i-suit, futhi yiziphi izici ezingekho kahle. Thola ukuqonda okusebenzayo ngeziphakamiso eziwusizo usebenzisa amathuluzi e-inthanethi afana ne-Semalt Analyzer, i-Screaming Frog, noma i-Open Site Explorer ye-Moz.
Xhumana nabathonya bemboni yakho, qala i-podcast, wenze okuthunyelwe kwe-roundup futhi unganqikazi ukuhamba ngokubhula izivakashi - futhi cishe uzokwazi ukuthola i-webbacklinks yekhwalithi ngekhwalithi.
Konke, akufanele nanini ucele noma yiziphi izixhumanisi zekhwalithi, ngisho nezindawo ezigunyazayo kakhulu neziyigugu. Ngisho ukuthi kungcono ukukhokha phambili - ngokusebenzisa imidiya yezenhlalo nokunikeza okuqukethwe okunembile (njenge-infographics, amaspredishithi, okunye okuqukethwe okubukwayo okuhlukile), kanye nokutshala isikhathi esithile ukuze unikeze izipho eziyigugu kunazo zonke ezithameli zakho, njengoba amaphepha okucwaninga ahlobene nezimboni, izifundo zocwaningo, njll Source .